Somali | Business Victoria
Grants, vouchers, and assistance programs
Business Resilience Package
Small Business Digital Adaptation Program
Barnaamijka La Qabsiga Digital
Caawinta ganacsiyada yaryar ee Victoria inay dhisaan awooddooda dhijitaalka ah
Waa maxay Barnaamijka La Qabsiga Dijital ah ee Ganacsiga Yaryar?
Barnaamijka La-qabsiga Dijital ah ee Ganacsiga Yar-yar ayaa u oggolaan doonaa ganacsiyada u-qalma inay tijaabiyaan kadib marka ay helaan marinnada alaabada dhijitaalka ah, aaladaha iyo tababbarka ay u isticmaali karaan inay ku dhisaan awood dhijitaal ah hawl-maalmeedkooda.
Ganacsiyadu way awoodi doonaan inay isdiiwaan galiyaan, oo ay tijaabiyaan alaabada dhijitaalka ah ee laga soo xulay alaab-qeybiyeyaasha lashaqeystay Dowladda Victoria, kadib ay doortaan mid ka mid ah badeecadahan inay iibsadaan.
Marka ganacsatadu iibsadaan shay, waxay dalban karaan lacag celin $1,200 ah si ay u helaan badeecada muddo 12 bilood ah.
Barnaamijku wuxuu kaloo bixiyaa tababar la-qabsi dhijitaal ah oo bilaash ah iyo aqoon-isweydaarsiyo si looga caawiyo ganacsiyada diiwaangashan inay qaataan oo ay ku hirgeliyaan aaladaha internetka ganacsigooda.
Fadlan hubi inaad si taxaddar leh u akhrido tilmaamaha barnaamijka iyo su'aalaha inta badan la isweydiiyo Barnaamjika La Qabsiga Ganacsiga Yaryar Bogga Soo dejinta wixii faafaahin ah buuxda ee barnaamijkamn
Intee ayuu barnaamijku u furan yahay?
Diiwaangelintu way sii furnaan doontaa laga buuxiyo mudada ka dambeysta ama ilaa 11.59pm 28ka Febraayo 2021, hadba kii hore.
Wixii caawin dheeraad ah fadlan Ganacsiga Victoria or ama wac 13 22 15.
Ayaa u qalma?
Barnaamijku wuxuu u furan yahay oo keliya ganacsatada Victoria ee u qalma, ganacsiyada yaryar iyo kuwa yaryar. Si aad ugu qalanto barnaamijka codsaduhu waa inuu:
ka shaqeyso ganacsi ku yaal Victoria
hayso nambarka ganacsiga Australia (ABN)
waxay qabteen ABN markay ahayd 13 September 2019
ka diiwaan gashan tahay Canshuuraha Alaabada iyo Adeegyada (GST) 13 Sebtember 2020.
Hay'adaha aan macaash-doonka ahayn ee aan u diiwaangashanayn GST oo ka diiwaangashan hay'adaha Samafalka ee Australia iyo Komishanka Aan-Macaash-doonku xaq u lahayn inay codsadaan.
Ganacsiyada aan looga baahnayn sharciga canshuuraha ee khuseeya in loo diiwaangaliyo GST ayaa xaq u leh inay codsadaan.
Codsadeyaashu waa inay buuxiyaan shuruudaha u-qalmitaanka oo ay oggolaadaan shuruudaha lagu sharraxay tilmaamaha barnaamijka ee ku yaal Barnaamijka Yar-Bixinta Dhijital ah ee Yaryar bogga soo dejinta.
Codsadeyaashu sidoo kale waxay u baahan yihiin inay caddeeyaan inay hadda shaqeynayaan oo ay damacsan yihiin inay ganacsigooda la qabsadaan jawiga hawlgalka ee dhijitaalka ah.
Ganacsiyadu xaq uma laha barnaamijka haddii wax macluumaad ah oo ku jira codsigooda laga helo si ula kac ah been ama marin habaabin.
Si aad ugu qalanto lacagta wax iibsiga ganacsigu waa inuu iibsadaa alaab dhijitaal ah oo laga heli karo barnaamijka.
Ganacsi u qalma, sida lagu qeexay ABN-keeda, wuxuu heli karaa oo keliya hal soo-celin iibsi oo ah $1,200 si loo daboolo marinka 12 bilood ee alaabada dhijitaalka ah ee laga heli karo barnaamijkan.
Sidee barnaamijku u shaqeeyaa?
Buuxi foomka diiwaangelinta si loo xaqiijiyo uqalmitaanka iyo ka-qaybgalka tijaabooyinka wax soo saarka iyo aqoon isweydaarsiyada
Saxiix oo soo iibso alaabada ay doorbidayaan ee dhijitaalka ah iyada oo loo marayo mid ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha wax soo saarka lamaanaha ee laga heli karo barnaamijkan
Dalbo soo-celinta iibka ee $1,200 si loo daboolo marinnada 12 ee badeecada la doortay
Sideen isugu diiwaangeliyaa tijaabooyinka iyo aqoon isweydaarsiyada?
Waxaad u baahan doontaa inaad buuxiso foomka diiwaangelinta khadka foradigoo ka jawaabaya su'aalo gaaban oo taxane ah. Waa lagaala soo xiriiri karaa ka dib markii aad isdiiwaangeliso si aad u xaqiijiso macluumaadka lagu siiyay oo aad u xaqiijiso uqalmitaankaaga barnaamijka.
Diiwaangelinta waxaa lagu xaqiijin doonaa emayl oo ay ku jiri doonto isku xirnaanta websaydka u gooni ah halkaas oo macluumaad laga heli karo oo ku saabsan tababarka iyo aqoon isweydaarsiyada, iyo sidoo kale tijaabooyinka alaabada dhijitaalka ah iyo iibsashada.
Kadib markaad isdiiwaangeliso waad dhammaysan kartaa aqoon-isweydaarsiyo aan xadidnayn iyo tijaabooyin badan oo alaab dhijitaal ah illaa 28 Febraayo 2021.
Sideen ugu horumaraa barnaamijka?
Waa inaad isdiiwaangalisaa si aad ugu qalanto barnaamijka.
Waad heli kartaa tababar bilaash ah iyo aqoon isweydaarsiyo iyo tijaabooyin badeecado badan oo bilaash ah ka dib markaad isdiiwaangeliso.
Waxaa lagugu martiqaadi doonaa emayl si aad u dalbato dib-u-iibsiga bil ka dib markii aad isdiiwaangelisay.
Kani waa barnaamijka lacag celinta. Waa inaad saxiixdaa oo aad iibsataa alaab dhijitaal ah oo la heli karo ka hor intaadan dalban.
Codsiga lacag-soo-celinta waa foomka onlaynka ah. Dhammaan su'aalaha waa in laga jawaabaa oo macluumaad ayaa la siinaya si loo hubiyo uqalmitaankaaga dib-u-dhimista. Tan waxaa ku jira caddaynta wax soo saarka alaabta dhijitaalka ah.
Waxaa lagaala soo xiriiri doonaa emayl lix usbuuc kadib markaad codsato lacag celin si loo xaqiijiyo inaad bilowday inaad laqabsato meheraddaada jawi dhijitaal ah. Kordhintaada ayaa la bixin doonaa ka dib markaad xaqiijiso sii wadida isticmaalka badeecada.
Waa lagaala soo xiriiri doonaa si aad uga qaybgasho sahan qiimeyn ah lix iyo 12 bilood kadib si aad nooga caawiso inaan fahamno saameynta barnaamijka.
Waxaad u baahan doontaa inaad bixiso kharashyada socda 12-ka bilood ee ugu horreeya barnaamijka.
Muxuu barnaamijka daboolayaa?
Alaabada ay doorteen ganacsiyada u qalma waa inay ahaadaan:
wax soo saar cusub oo aysan hadda isticmaalin ganacsigu, ama
casriyeyn lagu sameeyo badeecad jirta oo leh astaamo alaab dheeri ah oo bixineysa awood gaar ah oo la qabsi dhijitaal ah (tusaale ahaan, casriyaynta degel jira ee barta ganacsiga e-commerce), ama
badeecad laga heli karo barnaamijka oo ay ganacsigu horay u isticmaali jireen (in ka badan hal sano ka hor) oo ay jeclaan laheyd inay dib u bilowdo isticmaalkeeda.
Barnaamijka La Qabsiga Digital Digital Business ma daboolayo kharashka:
cusbooneysiinta shatiyada badeecada ama softiweerka ee jira, ama
cusbooneysiin yar oo ku saabsan alaabooyinka jira (tusaale ahaan, cusbooneysiinta nooca software-ka), ama
alaabta aan laga heli karin barnaamijka.
Ganacsiyada diiwaangashan waxay kaqaybqaadan karaan tababarka iyo aqoon-isweydaarsiyada lagu muujiyey jadwalka tababarka ee laga heli karo bogga barnaamijka u heellan ka dib diiwaangelinta. Ganacsatada haysta badeecadaha jira iyo barnaamijyada softiweerka ah ee laga soo iibsaday
barnaamijkan waxay sidoo kale awood u leeyihiin inay ka qayb galaan aqoon isweydaarsiyo kor loogu qaadayo websaydhka Ganacsiga Victoria.
Taariikhaha barnaamijka muhiimka ah
Barnaamijku wuxuu furnaan doonaa laga bilaabo 15ka Nofeembar 2020 illaa 31 Maarso 2021.
Diiwaangelinta tijaabooyinka alaabada dhijitaalka ah iyo aqoon isweydaarsiyada ayaa sii furnaan doona laga bilaabo 15ka Noofambar 2020 illaa 28 Febraayo 2021.
Si aad uga qaybgasho barnaamijka, ganacsatadu waa inay isdiiwaan geliyaan kahor intaan maxkamaddu xirmin 28 Febraayo 2021.
Codsiyada dib-u-soo-celinta iibka si loo daboolo 12 bilood 'helitaanka wax soo saarka ayaa furnaan doona laga bilaabo 1December 2020 ilaa 11.59pm 31-ka Maarso 2021, ama ilaa lacagtu dhammaato.
Macluumaad dheeraad ah
Dib-u-celinta $1,200 ee iibsigu waxay u dhigantaa ugu yaraan 12 bilood 'helitaanka qalab dhijitaal ah oo laga heli karo barnaamijkan. Qiimaha gelitaanka lacagta qalaad iyo alaabada boqolkiiba iibka way kala duwanaan doontaa iyadoo ku xiran sicirka sarrifka iyo isticmaalka.
Waaxda Shaqooyinka, Dagmooyinka iyo Gobollada waxay xaq u leeyihiin inay wax ka beddelaan tilmaamahan iyo shuruudaha dalabka waqti kasta.
Waaxda Shaqooyinka, Degmooyinka iyo Gobollada waxay ku dadaali doonaan inay ku wargeliyaan dhammaan ganacsiyada natiijada dalabkooda soo-celinta wax iibsiga 10 maalmood oo shaqo gudahood.
Haddii aad su'aalo ka qabtid barnaamijkan, fadlan tixraac Barnaamijka Yar-yar ee La-qabsashada Dhijitaalka ah ee Yaryar ee Su'aalaha laga weydiiyo ee ku yaal Barnaamijka Soo-Degitaanka Dhijitaalka ee Ganacsiga Yaryar soo dejinta bogga.
Unsure about your eligibility? Get in touch with a local Business Development Manager
Close quick view window
© Copyright DJPR 2021
Page updated: 14 Dec 2020